Eshibhile i-Anodized aluminium alloy machining parts ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
I-Anodized aluminium alloy ingakha ungqimba olufanayo noluminyene oxide ebusweni bomkhiqizo, "(Al2O3, 6H2O igama elijwayelekile lensimbi jade)" Le filimu ingenza ubunzima bendawo yomkhiqizo bufinyelele (200-300HV) ", uma imikhiqizo ekhethekile ingenziwa i-Anodizing enzima, ubunzima bendawo yomkhiqizo bungafinyelela ku-400-1200HV, ngakho-ke i-anodizing enzima kuyindlela ebaluleke kakhulu yokwelashwa kwendawo yamasilinda kawoyela, ukuhanjiswa, nokunye.
Izingxenye ze-6063 aluminium alloy anodised cnc machining
Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo unokumelana okuhle kakhulu kokugqoka futhi ungasetshenziswa njengenqubo edingekayo yemikhiqizo ehlobene nezindiza kanye ne-aerospace. Umehluko phakathi kwe-oxidation ye-anodic ne-oxidation enzima ye-anodic: i-anodic oxidation ingafakwa umbala, futhi umhlobiso ungcono kakhulu kune-oxidation enzima ye-anodic. Amaphuzu wokwakha: i-Anodic oxidation idinga izinto eziqinile kakhulu, futhi izinto ezahlukahlukene zinemiphumela ehlukene yokuhlobisa ngaphezulu. Izinto ezisetshenziswa ngokujwayelekile zingama-6061, 6063, 7075, 2024, njll., Phakathi kwazo, u-2024. Iphansi kakhulu ngenxa yokuqukethwe okuhlukile kwe-CU kokuqukethwe. Ngakho-ke i-7075 i-oxidation eqinile iphuzi, i-6061, i-6063 inombala onsundu, kepha i-anodized 6061, 6063, 7075 ejwayelekile ayiwona umehluko omkhulu, kepha u-2024 uthambekele ezindaweni eziningi zegolide.
Isahlulelo esivamile esingajwayelekile sekhwalithi
Amabala avela phezulu. Lolu hlobo lokungajwayelekile ngokuvamile lubangelwa wukucishwa kwensimbi okungalungile nokushisa noma izinto ezimbi uqobo. Indlela yokwelashwa ukushisa kabusha ukwelashwa. Noma shintsha indaba.
B. imibala yothingo ivela phezulu. Lolu hlobo lokungajwayelekile ngokuvamile lubangelwa yiphutha lokusebenza kwe-anode. Iyakhululeka lapho ilenga, ibangele ukungaqhubi kahle komkhiqizo. Isixazululo, de-energize uphinde uvuselele kabusha.
C. indawo ilimele futhi iklwebheke kakhulu. Lolu hlobo lokungajwayelekile ngokuvamile lubangelwa ukusebenza budedengu ngesikhathi sokuhamba noma sokucutshungulwa, futhi indlela yokwelashwa ukubuyisa ugesi, ukupholisa nokuphinda unike amandla.
D. kuvela amabala amhlophe ebusweni ngesikhathi sokudaya. Lokhu okungavamile kuvame ukubangelwa uwoyela noma okunye ukungcola emanzini ngesikhathi sokusebenza kwe-anode.
Isethenjwa kumazinga wekhwalithi ye-aluminium alloy machining
1. Ubukhulu befilimu bungu-5-25um, ubulukhuni bungaphezulu kwe-200HV, izinga lokushintsha kombala lesilingo sokubekwa uphawu lingaphansi kuka-5%.
2. Ukuhlolwa kwesifutho kasawoti kungaphezu kwamahora angama-36, futhi kungafinyelela izinga le-CNS ngenhla kuka-9.
3. Ukubukeka akumele kube nokulimala, ukuklwebheka, amafu anemibala, njll. Ingaphezulu le-aluminium alloy izingxenye ezenziwe ngomshini akumele zibe nezimo ezingathandeki njengezindawo zokulenga, ukuphuzi, njll.
Amazwi: Izingxenye ze-die-cast aluminium, ezinjenge-A380, A365, A382, njll.
Izinto Ingxubevange ye-Aluminium 6061, 6063, 7075, 2024
Langaphambilini Izingxenye ze-Aluminium alloy radiator ezikhishiwe
Olandelayo: Izingxenye zemishini ye-aluminium engu-6061-T6 emnyama eyenziwe ngomnyama